အသုဘ႐ုပ္အေလာင္းကုိ ေဆး႐ုံႀကီးအေအးတိုက္မွထုတ္ယူလာၿပီး ေသဆံုးသူရဲ႕အိမ္သုိ႔ပို႔လိုက္ေသာအခါ - CeleLove
February 14, 2020 CeleLove ဘ၀ႏွင့္ပညာေပး 0
” အမဘာျဖစ္လို႔လဲ ” လို႔ကြၽန္ေတာ္ကေမးလိုက္ေတာ့… ဟိုေလ ” ဆရာ အျပင္မွာေသတဲ့အေလာင္းကို အိမ္ထဲမသြင္းေကာင္းဘူးတဲ့ အိမ္သားေတြခိုက္တက္တယ္ တဲ့ ” ၿပီးေတာ့ ရပ္ကြက္ကလဲမႀကိဳက္ဘူး ရပ္ကြက္နာတယ္တဲ့… ေဟာဗ်ာ…”ဒါနဲ႔အမ အခုေသတဲ့သူက အမနဲ႔ဘာေတာ္လဲ လို႔ေမးလိုက္ေတာ့ “… ဆရာ အခုဆုံးသြားတဲ့သူက ကြၽန္မအေဖ ပါတဲ့ … ။
ေအာ္…ဟုတ္ကဲ့ အမအေဖလား ဒါဆိုအိမ္ထဲအေလာင္းမျပင္ဘူး အျပင္မွာပဲ အေလာင္းျပင္မယ္ေပါ့ ဟုတ္လားအမ… ဟုတ္ကဲ့ ဆရာ အျပင္မွာပဲျပင္ေပးပါတဲ့…ေကာင္းပါၿပီအမ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ အမတို႔စိတ္တိုင္းက် အျပင္မွာပဲအေလာင္းျပင္ေပးပါမယ္ ငိုတဲ့သူကငိုၾကတယ္ ကြၽန္ေတာ္တို႔လဲ လုပ္စရာရွိတဲ့ကိစၥအဝဝကိုေဆာင္႐ြက္ေပးၿပီး ကူညီေပးခဲ့ပါၿပီ …. ။
ေနပူထဲမွာလႈပ္ရွား႐ုန္းကန္ၿပီး သားသမီးေတြမ်က္နာမငယ္ရေအာင္ ေကြၽးေမြးျပဳစု ရွာေဖြ ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ရတဲ့ ေဖေဖ… သားသမီးေတြအတြက္ဆို မားမားမတ္မတ္ရပ္တည္ေပးခဲ့တဲ့ ေဖေဖ… အိမ္ေထာင္ဦးစီး သူေတာ္ေကာင္းႀကီး ေဖေဖ… ေဖေဖ ရယ္ … အခု ေဖေဖ ေသဆုံးသြားေတာ့ အိမ္ထဲေတာင္အဝင္မခံေတာ့ဘူး ေဖေဖရယ္…
အိမ္ေထာင္ဦးစီး ေဖေဖ ႐ုန္းကန္ရွာေဖြၿပီး စုေဆာင္းကာ ေဖေဖေဆာက္ခဲ့တဲ့အိမ္ေလး အခု ေဖေဖ ေဂါင္းခ်ဖို႔ေတာင္ ေနရာမရွိေတာ့ဘူး ေဖေဖရယ္… ေဖေဖ ေကြၽးေမြးျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္ ခဲ့တာ နစ္ေပါင္းမ်ားစြာပါ ေဖေဖ အခုေတာ့… ေနာက္ထပ္ ၅ရက္ေနရင္ ေဖေဖကို အိမ္ကေန သားသမီးေတြက ရာသက္ပန္နင္ထုတ္ေတာ့မွာ ေဖေဖရယ္…
ေဖေဖ ေခြၽးနည္းစာေလးနဲ႔ပိုက္စံစုၿပီး လိုအပ္ရင္ အရန္သင့္ျဖစ္ေအာင္ သားသမီးေတြအတြက္ ရည္႐ြယ္ကာ ဝယ္ထားတဲ့ ေဖေဖ ေ႐ႊလက္စြပ္ေလး အခုျဖဳတ္ယူသြားၾကၿပီ ေဖေဖရယ္… ေဖေဖတမလြန္ကိုသြားေတာ့ ပုဆိုးအေဟာင္းေလးနဲ႔ အက်ီအႏြမ္းေလး ေဖေဖအတြက္ဆိုၿပီး ထည့္ေပးလိုက္ၿပီေနာ္ ေဖေဖ…
ရပ္ကြက္ကအဝင္မခံဘူးေျပာရေအာင္ ရပ္႐ြာေကာင္းက်ိဳးသာေရး နာေရးေတြ ဆြမ္းေလာင္း အသင္းေတြ ပါဝင္ၿပီး ဦးေဆာင္ဦး႐ြက္တက္အားသေရာကုသိုလ္ယူျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ေဖေဖ… အခု ေဖေဖ ကိုေတာင္အဝင္မခံေတာ့ဘူး ရပ္ကြက္နာတယ္တဲ့ တရားရဲ႕လားေဖေဖရယ္… ေဖေဖ ေပးခဲ့တဲ့ ေမတၱာတရားေတြကတန္ဖိုးမျဖတ္နိင္ေအာင္ ႀကီးမားလွပါတယ္ ေဖေဖရယ္။
ကိုယ္သိပ္ခ်စ္ပါတယ္ ခ်စ္ပါတယ္ ဆိုၿပီး ပါးစပ္ကေလးနဲ႔မိဘေက်းဇူးတရားေတြကို တန္ဖိုးမျဖတ္လိုက္ၾကပါနဲ႔ … မိဘေက်းဇူးကို မဆပ္မိၾကလို႔ ေသခါမွေနာင္တမရမိၾကလိုက္ပါနဲ႔ေနာ္ …. ။
ဤစာသားေလးကို မိဘေက်းဇူးနင့္ အယူသီးမႈေတြကိုပါပေပ်ာက္ေအာင္ ကြၽန္ေတာ္ရင္ထဲကခံစားခ်က္ေလးနဲ႔အတူေရးသားၿပီး မွ်ေဝေပးလိုက္ပါရေစ….
စာေရးသူကို ေလးစားစြာ credit ေပးပါတယ္ …. ။
အသုဘရုပ်အလောင်းကို ဆေးရုံကြီးအအေးတိုက်မှထုတ်ယူလာပြီး သေဆုံးသူရဲ့အိမ်သို့ပို့လိုက်သောအခါ
” အမဘာဖြစ်လို့လဲ ” လို့ကျွန်တော်ကမေးလိုက်တော့… ဟိုလေ ” ဆရာ အပြင်မှာသေတဲ့အလောင်းကို အိမ်ထဲမသွင်းကောင်းဘူးတဲ့ အိမ်သားတွေခိုက်တက်တယ် တဲ့ ” ပြီးတော့ ရပ်ကွက်ကလဲမကြိုက်ဘူး ရပ်ကွက်နာတယ်တဲ့… ဟောဗျာ…”ဒါနဲ့အမ အခုသေတဲ့သူက အမနဲ့ဘာတော်လဲ လို့မေးလိုက်တော့ “… ဆရာ အခုဆုံးသွားတဲ့သူက ကျွန်မအဖေ ပါတဲ့ … ။
အော်…ဟုတ်ကဲ့ အမအဖေလား ဒါဆိုအိမ်ထဲအလောင်းမပြင်ဘူး အပြင်မှာပဲ အလောင်းပြင်မယ်ပေါ့ ဟုတ်လားအမ… ဟုတ်ကဲ့ ဆရာ အပြင်မှာပဲပြင်ပေးပါတဲ့…ကောင်းပါပြီအမ ကျွန်တော် တို့ အမတို့စိတ်တိုင်းကျ အပြင်မှာပဲအလောင်းပြင်ပေးပါမယ် ငိုတဲ့သူကငိုကြတယ် ကျွန်တော်တို့လဲ လုပ်စရာရှိတဲ့ကိစ္စအဝဝကိုဆောင်ရွက်ပေးပြီး ကူညီပေးခဲ့ပါပြီ …. ။
အသုဘအလောင်းပြင်ပြီး အပြန်ကားပေါ်မှာ ကျွန်တော် အသိအမှန်တရားတစ်ခု ချက်ချင်း ရလိုက်ပါတယ် အဲ့ဒါက ဘာလဲဆိုတော့….. အော်…. ငယ်စဉ်တောင်ကျေးကလေးဘဝကနေ လူလားမြှောက်အောင် ပညာတက်ကြီးဖြစ်အောင် ပြုစုပျိုးထောင်ပေးခဲ့တဲ့ ကိုယ့်ဖေဖေ …
နေပူထဲမှာလှုပ်ရှားရုန်းကန်ပြီး သားသမီးတွေမျက်နာမငယ်ရအောင် ကျွေးမွေးပြုစု ရှာဖွေ စောင့်ရှောက်ခဲ့ရတဲ့ ဖေဖေ… သားသမီးတွေအတွက်ဆို မားမားမတ်မတ်ရပ်တည်ပေးခဲ့တဲ့ ဖေဖေ… အိမ်ထောင်ဦးစီး သူတော်ကောင်းကြီး ဖေဖေ… ဖေဖေ ရယ် … အခု ဖေဖေ သေဆုံးသွားတော့ အိမ်ထဲတောင်အဝင်မခံတော့ဘူး ဖေဖေရယ်…
အိမ်ထောင်ဦးစီး ဖေဖေ ရုန်းကန်ရှာဖွေပြီး စုဆောင်းကာ ဖေဖေဆောက်ခဲ့တဲ့အိမ်လေး အခု ဖေဖေ ဂေါင်းချဖို့တောင် နေရာမရှိတော့ဘူး ဖေဖေရယ်… ဖေဖေ ကျွေးမွေးပြုစု စောင့်ရှောက် ခဲ့တာ နစ်ပေါင်းများစွာပါ ဖေဖေ အခုတော့… နောက်ထပ် ၅ရက်နေရင် ဖေဖေကို အိမ်ကနေ သားသမီးတွေက ရာသက်ပန်နင်ထုတ်တော့မှာ ဖေဖေရယ်…
ဖေဖေ ချွေးနည်းစာလေးနဲ့ပိုက်စံစုပြီး လိုအပ်ရင် အရန်သင့်ဖြစ်အောင် သားသမီးတွေအတွက် ရည်ရွယ်ကာ ဝယ်ထားတဲ့ ဖေဖေ ရွှေလက်စွပ်လေး အခုဖြုတ်ယူသွားကြပြီ ဖေဖေရယ်… ဖေဖေတမလွန်ကိုသွားတော့ ပုဆိုးအဟောင်းလေးနဲ့ အကျီအနွမ်းလေး ဖေဖေအတွက်ဆိုပြီး ထည့်ပေးလိုက်ပြီနော် ဖေဖေ…
ရပ်ကွက်ကအဝင်မခံဘူးပြောရအောင် ရပ်ရွာကောင်းကျိုးသာရေး နာရေးတွေ ဆွမ်းလောင်း အသင်းတွေ ပါဝင်ပြီး ဦးဆောင်ဦးရွက်တက်အားသရောကုသိုလ်ယူပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ဖေဖေ… အခု ဖေဖေ ကိုတောင်အဝင်မခံတော့ဘူး ရပ်ကွက်နာတယ်တဲ့ တရားရဲ့လားဖေဖေရယ်… ဖေဖေ ပေးခဲ့တဲ့ မေတ္တာတရားတွေကတန်ဖိုးမဖြတ်နိင်အောင် ကြီးမားလှပါတယ် ဖေဖေရယ်။
နောက်ဆုံး ဖေဖေရလိုက်တဲ့အရာတွေက တန်ဖိုးနည်းလိုက်တာ ဖေဖေ ဖေဖေ… ရယ် လောဘ ဒေါသ မောဘ တွေပြည့်နှက်နေတဲ့ လူ့လောကကြီးက ကိလေသာအပူမီးတွေ တောက်လောင်နေတာပါ။ ဒါန သီလ ဘာဝနာ တွေကသာ ဖေဖေ နောက်ပါမှာ ကောင်းရာသုဂတိမှာ ဖေဖေ ပျော်မွှေ့ပါစေနော် ….
ကိုယ်သိပ်ချစ်ပါတယ် ချစ်ပါတယ် ဆိုပြီး ပါးစပ်ကလေးနဲ့မိဘကျေးဇူးတရားတွေကို တန်ဖိုးမဖြတ်လိုက်ကြပါနဲ့ … မိဘကျေးဇူးကို မဆပ်မိကြလို့ သေခါမှနောင်တမရမိကြလိုက်ပါနဲ့နော် …. ။
ဤစာသားလေးကို မိဘကျေးဇူးနင့် အယူသီးမှုတွေကိုပါပပျောက်အောင် ကျွန်တော်ရင်ထဲကခံစားချက်လေးနဲ့အတူရေးသားပြီး မျှဝေပေးလိုက်ပါရစေ….
စာရေးသူကို လေးစားစွာ credit ပေးပါတယ် …. ။